အိမ်မှာစိတ်တိုင်းကျဘီယာချက်သောက်လို့ရနိုင်မယ့် PicoBrew ဘီယာချက်စက် – DigitalTimes.com.mm
သူငယ်ချင်းတွေစုကြမယ် သောက်ကြမယ် စားကြမယ်လို့စဉ်းစားလိုက်တိုင်း ဘယ်ဆိုင်သွားသောက်ရမလဲဆိုတာက အဓိကကွိုင်ပါ။ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ယာလို စိတ်တိုင်းကျကဲနိုင်သောက်နိုင်တဲ့နေရာမျိုးဆိုတာတော်တော့်ကိုရှားပါတယ်။ ဒီတော့ အိမ်မှာတင် ကိုယ့်ဘာသာဘီယာချက်ပြီး လူကြိုက်သလောက်စု ကြိုက်သလောက်သောက် ကြိုက်သလိုကဲလို့ရနိုင်ရင် ဘယ်လောက်တောင် ကောင်းလိမ့်မလဲ?
ဒီအတွက် ကိုယ်တိုင်အိမ်မှာဘီယာချက်နိုင်မယ့် ဘီယာချက်စက်လေးတစ်လုံးနဲ့ မိတ်ဆက်လိုက်ချင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့နာမည်လေးကတော့ PICO BREW ပါ။
ဘီယာအမျိုးအစားပေါင်းများစွာကို အိမ်မှာတင်ဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး မတူညီတဲ့ဘီယာအရသာတွေခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ကတော့ အွန်လိုင်းမှာ ပေါင်းစပ်ချိန်ပြီးသား pack တွေကို Brewie, PicoBrew စတဲ့ဝဘ်ဆိုဒ်တွေမှာဝယ်ယူလို့ရနိုင်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကလည်း ရိုးရှင်းပါတယ်။ တစ်ခါတည်းစပ်ထားပြီးသား ပါဝင်ပစ္စည်းအထုပ်ကို စက်ထဲကိုထည့်လိုက်တာနဲ့ ဘီယာချက်လို့ရပါပြီ။ အခါးပမာဏကိုလည်း အနည်းအများချိန်ညှိလို့ရနိုင်ပြီး တစ်ဂါလံလောက် ချက်နိုင်တဲ့အတွက် ၄လီတာလောက်နီးနီး အေးဆေးသောက်နိုင်ပါတယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်းထည့်တဲ့ခွက်ကလည်း အလွယ်တကူထုတ်လို့ရပြီး ဆေးလို့လည်းလွယ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် water tank တစ်ခုကတော့ ရေထည့်ဖို့၊ အချဉ်ဖောက်ဖို့ ဘီယာထည့်ဖို့စည်အနေနဲ့ မျိုးစုံသုံးလို့ရပါတယ်။
PicoBrew ရဲ့ အလေးချိန်ကတော့ ၃၁.၅ ပေါင်ပဲရှိပြီး သယ်လို့တော့ အဆင်ပြေတဲ့အရွယ်အစားပါ။ ဈေးနှုန်းကတော့ ဒေါ်လာ ၃၅၀ ဝန်းကျင်လောက်ပါပဲ။ ingredient pack တွေကတော့ သက်သက်မှာဝယ်ရမှာပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ဘီယာအမျိုးအစားကိုရွေးပြီး pack တွေဝယ်၊ ထည့် ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ ကိုယ်တိုင်အိမ်မှာချက်ပြီးသောက်နိုင်ပါပြီ။
ကဲ….ဒီတော့ TGIF အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် မွေးနေ့ပွဲဘာပွဲညာပွဲရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ခရီးတူတူသွားတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်အရသာအတိုင်း သောက်လို့ရနိုင်အောင် Pico Brew လေးကစောင့်မျှော်နေပါပြီ 😉
Ref: DigitalTrend, TheKegTap
သူငယျခငျြးတှစေုကွမယျ သောကျကွမယျ စားကွမယျလို့စဉျးစားလိုကျတိုငျး ဘယျဆိုငျသှားသောကျရမလဲဆိုတာက အဓိကကှိုငျပါ။ ကိုယျ့အိမျကိုယျ့ယာလို စိတျတိုငျးကကြဲနိုငျသောကျနိုငျတဲ့နရောမြိုးဆိုတာတျောတေျာ့ကိုရှားပါတယျ။ ဒီတော့ အိမျမှာတငျ ကိုယျ့ဘာသာဘီယာခကျြပွီး လူကွိုကျသလောကျစု ကွိုကျသလောကျသောကျ ကွိုကျသလိုကဲလို့ရနိုငျရငျ ဘယျလောကျတောငျ ကောငျးလိမျ့မလဲ?
ဒီအတှကျ ကိုယျတိုငျအိမျမှာဘီယာခကျြနိုငျမယျ့ ဘီယာခကျြစကျလေးတဈလုံးနဲ့ မိတျဆကျလိုကျခငျြပါတယျ။ သူ့ရဲ့နာမညျလေးကတော့ PICO BREW ပါ။
ဘီယာအမြိုးအစားပေါငျးမြားစှာကို အိမျမှာတငျဖနျတီးနိုငျမှာဖွဈပွီး မတူညီတဲ့ဘီယာအရသာတှခေံစားနိုငျဖို့အတှကျကတော့ အှနျလိုငျးမှာ ပေါငျးစပျခြိနျပွီးသား pack တှကေို Brewie, PicoBrew စတဲ့ဝဘျဆိုဒျတှမှောဝယျယူလို့ရနိုငျပါတယျ။
သူ့ရဲ့အလုပျလုပျပုံကလညျး ရိုးရှငျးပါတယျ။ တဈခါတညျးစပျထားပွီးသား ပါဝငျပစ်စညျးအထုပျကို စကျထဲကိုထညျ့လိုကျတာနဲ့ ဘီယာခကျြလို့ရပါပွီ။ အခါးပမာဏကိုလညျး အနညျးအမြားခြိနျညှိလို့ရနိုငျပွီး တဈဂါလံလောကျ ခကျြနိုငျတဲ့အတှကျ ၄လီတာလောကျနီးနီး အေးဆေးသောကျနိုငျပါတယျ။ ပါဝငျပစ်စညျးထညျ့တဲ့ခှကျကလညျး အလှယျတကူထုတျလို့ရပွီး ဆေးလို့လညျးလှယျပါတယျ။ နောကျထပျ water tank တဈခုကတော့ ရထေညျ့ဖို့၊ အခဉျြဖောကျဖို့ ဘီယာထညျ့ဖို့စညျအနနေဲ့ မြိုးစုံသုံးလို့ရပါတယျ။
PicoBrew ရဲ့ အလေးခြိနျကတော့ ၃၁.၅ ပေါငျပဲရှိပွီး သယျလို့တော့ အဆငျပွတေဲ့အရှယျအစားပါ။ ဈေးနှုနျးကတော့ ဒျေါလာ ၃၅၀ ဝနျးကငျြလောကျပါပဲ။ ingredient pack တှကေတော့ သကျသကျမှာဝယျရမှာပါ။ ဒါဆိုရငျတော့ ကိုယျကွိုကျတဲ့ဘီယာအမြိုးအစားကိုရှေးပွီး pack တှဝေယျ၊ ထညျ့ ခလုတျတဈခကျြနှိပျရုံနဲ့ ကိုယျတိုငျအိမျမှာခကျြပွီးသောကျနိုငျပါပွီ။
ကဲ….ဒီတော့ TGIF အတှကျပဲဖွဈဖွဈ မှေးနပှေဲ့ဘာပှဲညာပှဲရှိလို့ပဲဖွဈဖွဈ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ခရီးတူတူသှားတဲ့အခါမှာပဲဖွဈဖွဈ ကိုယျ့စိတျကွိုကျအရသာအတိုငျး သောကျလို့ရနိုငျအောငျ Pico Brew လေးကစောငျ့မြှျောနပေါပွီ 😉
Pico Brew Beer Brewer